ကျွန်တော်နဲ့ မီးမီး (ဝမ်းကွဲညီမ) – Grab Love Story
ကျွန်တော်နဲ့ မီးမီး (ဝမ်းကွဲညီမ)
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အထန်ကောင်… အိမ်မှာနေအားရင် လိမ့်ထုနေတာ ….. ကိုယ့်အခန်းနဲ့ကိုယ်မို့တော်သေး…..
အိမ်မှာက အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ် အဒေါ်ရယ် ဦးလေးသမီး-ကျွန်တော့်ညီမဝမ်းကွဲ (မီးမီး) ရယ် စုစုပေါင်းလေးယောက် အမြဲနေတယ် အဖေကတော့ အဝေးမှာ အလုပ်နဲ့.
အဲ့တုန်းကမှန်မှတ်ရရ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့ အားနေတဲ့အချိန် …. မြင်မြင်သမျှဏှာထန် … အသက် ၁၅/၁၆ ဆိုတာ အပေါက်မှန်သမျှလျှိုချင် မိန်းမလိုချင်ကိုးဗျ…. မလွတ်လပ်တဲ့ အရွယ်လဲဖြစ်တော့ အနားရှိတဲ့လူကိုအဓိကထားပြစ်မှားပါလေရော…..
မီးမီးက ကျွန်တော့ထက် သုံးနှစ်ပဲငယ်တယ် သူက ဆယ့်သုံးနှစ် …
အပျိုပေါက်လေးကလဲဖြစ် ရင်လေးကလဲစူလာ ဖင်လေးကလဲကောက်လာတော့ ဒီကောင်ဘယ်နေမလဲ စိတ်ရိုင်းတေဝင် ခဏခဏ မှန်းမှန်းထုနေကျပေါ့….. ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်တေဆို ပုဆိုးအောက်စလွှတ်ပြရ သူရှိနေတာကို မသိသလိုဟန်ဆောင်ပြိ်ီး ဂွင်းထုပြရနဲ့ …..
အဲ့လိုတေလုပ်ပြနေရင်း သူ့ကိုမသိမသာအကဲခတ်ကြည့်တော့ သူကလဲ ချောင်းချောင်းကြည့်ပြီးစိတ်ပါနေတာရိပ်မိတယ်….. တစ်ရက်ကျတော့ သူနဲ့ကိုနှစ်ယောက်တည်းရှိတုန်း ကို့အခန်းထဲမှာ အဝတ်စားအကုန်ချွတ် ဂွင်းတိုက်နေတုန်း သူက အခန်းထဲဝင်လာတယ် ….အရင်က.
ယောင်နန ဖြစ်နေကြသေးတယ် ဖြစ်လာမှတော့ ကိုလဲ မထူးဇတ်ခင်းပြီိး အဝတ်လဲပြန်မဝတ်တော့ဘူး ဂွင်းတိုက်လျက်ပဲ သူ့ကို ” မီး ဘာလိုလို့လဲ ”
သူလဲကြောင်အမ်းအမ်းနဲ့ ” ဘာမှမလိုပါဘူး အိမ်မှာလဲဘယ်သူမှမရှိတော့ ပျင်းလို့ ကိုကိုရှိတာပဲဆိုပြီး ဝင်လာတာ ”
” အာ့ဆိုလဲထိုင်လေ” ကျွန်တော့အခန်းက လူပျိုအခန်းဆိုတော့ ကုတင် ဘီဒိုနဲ့ တီဗီစင်ကလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူး ဒီတော့ သူလဲကုတင်ပေါ်ပဲထိုင်လိုက်တယ် အဖျားနားလေးမှာ …. မီးမီးလဲရှိနေတော့ ကိုကောင်ကလဲ မာလိုက် ကြီးလိုက်တာဆိုတာ ပေါက်ထွက်မတတ်ဘဲ အသေဖီးရှိတာ ဆက်ထုလျက်ပဲ ….. ခင်ဗျားတို့လဲသိပါတယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ဂွင်းထုရတဲ့ဖီးကို …….
သူလဲကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေရင်း “ကိုကို အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲ”
“ဒါ ဂွင်းထုတယ်လို့ခေါ်တယ် မီးရဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖုတ်ကို လုပ်သလိုမျိုးပေါ့ အဖုတ်အစားလက်ကို ကွင်းပုံစံလေးလုပ်ပြီး အပေါ်အောက်ဆွဲဆော့တာ”
“ဖီးရှိတာပေါ့မီးရဲ့ မီးရော ဖီးရှိချင်ဘူးလား”
“မီးမှာမှ ကိုကို့လို ဟာမရှိတာ”
“ဟို—- ကိုကို့လိုလီးမှမရှိတာ ဘယ်လိုဆော့လို့ရမှာလဲ”
“အာ့ဆိုလက်ပေး ကိုကို့လီးကိုမီးကဆော့ မီးအဖုတ်ကလေးကိုဘယ်လိုဆော့ရမလဲ ကိုကိုသင်ပေးမယ်”
“လာ ကိုကိုပြမယ်” ဆိုပြီး သူ့လက်ကလေးကိုယူပြ်ီး လီးပေါ်တင် ဂွင်းတိုက်ခိုင်းလိုက်တာ ကောင်းတာဗျာ ကျွန်တော်တို့အမျိုးက တော်တယ် နှစ်ခါမသင်ရဘူး မီးမီးလဲ ဂွင်းတိုက် ဆျာမကြ်ီးတန်းဖြစ်သွားတာပဲ….
သူဂွင်းတိုက်ပေးနေတုန်း သူ့ ထဘီလေးကိုချွတ် တခါတည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီပါ ဆွဲချပြိ်ီး အဖုတ်လေးကို လှမ်းစမ်းလိုက်တယ်…. လူကတာ အဖုတ် မပွတ်တတ်သေးတာ အရေတေတော့ ရွှဲလို့….. သူနဲ့ ကျွန်တော်က ဘေးတိုက်အနေအထား 69 ပုံစံ ဘေးတစောင်း ကုတင်ပေါ်မှာ…
သူကလဲ ဒူးတစ်ဖက်ထောင် ပေါင်ကား အဖုတ်အပွတ်ခံနေသလို ကျွန်တော်ကလဲ ဒူးထောင်ပေါင်ကား ဂွင်းထုပေးတာခံနေတယ် …. သူ့အဖုတ်လေးက အမွေးရေးရေးလေးရယ် အပျိုစဝင်ခါစဆိုတော် အစိလေးကိုရဲနေတာပဲ….သူ့ကို ပိုပြိ်ီးစိတ်ရဲလာစေဖို့ ဖုန်းနဲ့ ဖူးကားဖွင့်ပြ်ီးသူ့ရှေ့ချထားပေးလိုက်တယ် …. အဖြူမက အဖြူကောင်လီးကို ဂွင်းထုပြ်ီး ရှယ်စုပ်နေတဲ့အခန်း….. သူလဲ ဖုန်းကြည့်ရင်း လီိးကြီးကိုင်ထားရင်းက နှုတ်ခမ်းခဏခဏသပ်နေတယ်… ကျွန်တော်လဲရိပ်မိတယ်လေ ဒါနဲ့ ” မီး ကို့လီးစုပ်ပေးလေ” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲ လီးထိပ်လေးကို လျက်တော့တာပဲ…. ဘယ်ကတည်းကစုပ်ချင်နေမှန်းမသိဘူး …. ကျွန်တော့ညမလဲ ကျွန်တော့်လိုပဲ အထန်…. ထိပ်လေးလျက်ပြီိး ခေါင်းလေးကို ရေခဲချောင်းစုပ်သလိုစုပ်နေတယ် အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ခေါင်းလေးကိုင်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးလိုက်တယ် မကြာဘူး လီးစုပ်ပါ ကျွမ်းသွားတယ်…. သူလီးစုပ်နေတုန်း အဖုတ်လျက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ် …… အဖတ်လေးနှစ်ခုကို ဘေးပို့ပြီး အဖုတ်ကို အပြားလိုက်ပင့်လျက်ပြိ်ီး အစိလေးကို စုပ်လိုက်တယ် …..
“အားးးးးရှီးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုကို ” တဲ့ ညီးသံလေးထွက်လာတယ်….. ကျွန်တော်လဲ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြ်ီး အဖုတ်လျက်နေလိုက်တယ် အပေါက်လေးကို လျှာလေးထိုး အစိလေးကို စုပ်နဲ့….. အပျိုစင်လေးဆိုတော့ အပေါက်က ပိတ်နေတယ်ဗျ … အရေလေးတေတော့ စိမ့်လို့ ….. ရသလောက်လေး လျှာလေးထိုးထည့်ရင်း ခဏကြာတော့ ကျွန်တေ်ာ့ခေါင်းကို သူ့အဖုတ်နဲ့ ဆွဲကပ် ဖင်ကိုကော့ပြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နဲ့ ” အားးးးး ကိုကို…… မီးသေပါပြ်ီ” ဆိုပြီး
သူပြ်ီးသွားတယ် …. ကိုလဲ သူ့ဖင်လေးကို အောက်ကနေဖက် လှမ်းထိမ်းပြီး အဖုတ်ရေလေးတေကို လျက်ပေးနေလိုက်တယ်….. သူအရှိန်ကျသွားတော့မှ….. “ကောင်းလားမီး”
“အရမ်းကောင်းတာပဲကိုကိုရယ် မီိးဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး .. သေးတေတောင်ထွက်ကုန်တယ်
“အဲ့ဒါ ပြ်ီးတယ်လို့ခေါ်တယ်မီးရဲ့ .. သေးမထွက်ပါဘူ အဖုတ်ထဲက အချစ်ရေတေ”
“ကိုကိုမှ မပြီးသေးတာ မီးရဲ့”
“မမောပါဘူး မီး ပြန်စုပ်ပေးမယ်နော်”
“စုပ် စုပ် အောက်က ဂွေးဥတေကောစုပ်ပေး… အတံတစ်ချောင်းလုံးလဲ လျက်ပေး…… လီးထိပ်က အပေါက်ကလေးကိုလဲ လျှာနဲ့ထိုး သေချာစုပ်ပေး ”
မီးမီးက ကျွန်တော်ပြောသမျှ တသဝေမသိမ်းပါပဲ …..
အတွေ့အကြုံမရှိတော့ တတ်သလို မှတ်သလိုလေး စိတ်ထင်ရာလုပ်ပေးနေတော့ တခါတခါ သွားနဲ့ထိမိတာကိုက ပိုဖီးရှိနေသလိုပါပဲဗျာ…….
ဥတေကို တစ်လုံးချင်းစုပ်တယ်…… ဥစုပ်နေရင်းဂွင်းတိုက်ပေးတယ် …… လီးကို အာခေါင်ထဲ ဝင်နိုင်သမျှထည့်ရင်း စုပ်ပေးနေတာ မကြာပါဘူး ကျွန်တော်လဲ မီးမီးခေါင်းကိုကိုင် စိတ်ကြိုက် ပါးစပ်ကိုအချက်နှစ်ဆယ်လောက်လိုးပြီး လည်ချောင်းထဲထိ သုတ်ရေပူပူတေ ပန်းထည့်ပေးလိုက်တယ်…. “အားးးးးးဖူးးးးဖူးးးး”
“ကောင်းလိုက်တာမီးရယ်” မီးမီးလဲ သုတ်ရည် တစ်စက်မကျန်စုတ်သောက်ပြ်ီး ကျွန်တော့ဘေးလာလှဲတယ်….
ကျွန်တော်လဲ သူ့ကိုဖက်ထားရင်း…. “ကောင်းလား မီးး”
“အရမ်းကောင်းတယ် လီိးစုပ်ရတာလဲ ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ် အဖုတ် အလျက်ခံရတာလဲ ကြိုက်တယ်”…..
“”ဒါတောင် လျှာနဲ့ပဲရှိသေးတယ်နော် အဖုတ်ဆိုတာ လီးနဲ့ လိုးမှ ပိုကောင်းတာ ”
“အခုတောင် တော်တော်ကောင်းနေပြီ ဒီထက်ကောင်းတာရှိသေးတယ်လားးးး”
“ဒါပေါ့ လီးနဲ့လိုးတဲ့အချိန်မှ နတ်ပြည်ရောက်သလိုကို ကောင်းမှာ ”
“အာ့ဆိုလဲ မီး နတ်ပြည်ရောက်ဖူးချင်တယ် ကိုကို”